Manenina ve ianao amin'ny fametrahana ny macOS 12 beta? Azonao atao ny miverina amin'ny macOS Big Sur | Avy amin'ny mac aho
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia navotsotra ho an'ny mpamorona ny fahafaha-mametraka beta an'ny macOS Monterey na macOS 12. Lazainay aminao ny fomba ahafahanao mametraka an'ity Beta ity amin'ny Mac-nao fa angamba rehefa afaka kelikely, tsy tianao ny fomba fiasa, ny olana na ny valiny andrasana. Ho an'izany isika dia manana ny vahaolana tonga lafatra izay miverena any amin'ny macOS Big Sur. Mianara manao azy.
Ny macOS 12 vaovao dia mitondra fisongadinana sy fanatsarana vaovao marobe, saingy tsy dia goavana izany raha ny amin'ny interface ny mpampiasa no jerena. Fa mitohy ho an'ny zavatra fantatroraha aleonao miverina alohan'ny andron'ny developer beta dia izao no azonao atao midina avy any macOS 12 beta mankany amin'ny macOS Big Sur.
Alohan'ny handehananao miaraka amin'ny dingan'ny fiverenana na araka ny iantsoana azy matetika, midina, misy zavatra roa tokony hataonao. Voalohany indrindra, manantena izahay fa nanao a nomaniny ho solon'izay alohan'ny fanavaozana ny kinova beta. Amin'izany no ahafahanao mamerina amin'ny laoniny aorian'ny backup rehefa nesorinao ny macOS 12 beta tamin'ny Mac.
Ny zavatra faharoa tokony ho fantatrao dia ny miverina amin'ny macOS Big Sur dia mila fafao ny macOS 12. Raha nametraka azy tamin'ny fizarazarana ianao, dia azonao atao ny mamafa ny partition fotsiny ary ny Mac-nao dia hiditra ao amin'ny macOS Big Sur. Fa raha nanamboatra macOS 12 beta vaovao ianao amin'ny kapila voalohany an'ny Mac anao, dia mila manao dingana vitsivitsy ianao.
1 Hamafa macOS 12 Monterey beta
2 Avereno apetraka macOS Big Sur
Hamafa macOS 12 Monterey beta
Manoro hevitra anao izahay mba hanana Vonona ny mpikirakira USB bootable ho an'ny macOS 11 Big Sur alohan'ny hamafana ny kinova beta an'ny macOS 12. Tsarovy fa ity fomba ity dia ho an'ireo izay nanao fametrahana vaovao macOS 12 beta amin'ny Mac azy amin'ny kapila lehibe tsy misy fizarazarana.
Tsindrio ny logo apple ao amin'ny menio sakafo ary safidio reboot.
Tano mafy izao Baiko + R mandra-pisehon'ny menio Asa vaventy.
Select Fitaovana fiarovana amin'ny startup, ampidiro ny teny miafina ary alefaso Avelao ny booting avy amin'ny media ivelany.
Avereno indray izao ary avereno amin'ny menio Utilities manaraka Dingana 2.
Eo ambanin'ny Utilities, safidio Fitaovana kapilaClick hanohy ary safidio ny Disk Amin'ny fanombohana (mety antsoina hoe Macintosh HD)
Tsindrio hamafa eo an-tampon'ny pejy ary misafidiana endrika iray. Mampidira anarana vaovao ho an'ny Mac anao na mandehana amin'ny Macintosh HD. Fampiasa Mac vaovao APFS, raha ny rafitra antitra kosa mandeha HFS + (MacOS nandeha).
Rehefa afaka indray mandeha, tsindrio ny bokotra hamafa ary miandry ny famaranana ny fizotrany.
Avereno apetraka macOS Big Sur
Mba hanatanterahana fametrahana macOS Big Sur madio dia mila izany ianao mampiasa USB drive baoty noforoninao.
Ampidiro ny kapila USB azo trandrahana, andraso ny hamoahana azy, ary kitiho amin'ny sary famantarana paoma ao amin'ny menio fisotroana. Hamarino tsara fa mifandray amin'ny Internet ianao.
Tsindrio eo Mivadika.
Raha mampiasa Mac miaraka amin'ny Apple Silicon ianao dia tsindrio ary tazomy ilay bokotra ignition mandra-pisehoan'ny fikandrana Safidy Amin'ny fanombohana. Amin'ny Mac misy Intel, kitiho ary tazomy ilay Fanalahidy safidy avy hatrany aorian'ny famadihana azy.
Ao amin'ny menio manaraka, safidio ny kapila boot, izay ny kapila USB bootable drive.
Tsindrio eo hanohy na tsindrio ny Ampidiro lakile.
Ny fanavaozana macOS Big Sur hanomboka hametraka izao ho fanavaozana mahazatra. Araho fotsiny ny torolàlana, misafidiana fiteny iray, manaova fanekena amin'ireo rindrambaiko, manome antsipiriany iCloud, sy maro hafa.
Araka ny hitanao Tsy dia sarotra atao izany, na dia mandreraka aza. Izany no antony anoloranay hevitra hatrany ny fametrahana beta, indrindra ny Mac, amin'ny fitaovana faharoa, satria raha tsy mahomby ny dingana iray, dia mety ho tsy ilaina intsony ny fitaovana mety lany andro na toy ny vato. maharary tsy maharary izany raha toa ka manodinkodina ny talen'ny asa aman-draharaha isan'andro isika.
Tsy misy zava-mitranga hametahana betas ary hihena indray fa tokony hataonao foana aorian'ny farafaharatsiny: Ataovy izany raha tsy fantatrao izay ataonao. Aza mivoaka an-tsehatra, manangona vaovao, ary avy eo mitsambikina ao anaty dobo, araka ny voalazan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Manenina ve ianao amin'ny fametrahana ny macOS 12 beta? Azonao atao ny miverina amin'ny macOS Big Sur